यस्तो बिजोग छ कोरोना उपचार गर्ने अस्पतालको, चिकित्सकहरुलाई पशुपतिनाथको भर ! – Dcnepal
Sun, 29 Mar, 2020 | २०७६ चैत १६ गते
‘अजिब’ कोरोना : १०३ वर्षका बाँचेका छन्, किशोर मरेका छन्
पोर्चुगलमा समस्यामा परेका नेपालीलाई एनआरएनए पोर्चुगलद्वारा राहत वितरण
ठेगाना एपले नेपालमा कोरेना सम्बन्धि सूचना ट्र्याकिंग गर्ने
सरकारका विद्युत महसुलमा छुट दिनेदेखि विश्वबैंकबाट ऋण लिनेसम्मका निर्णय
अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्या समाधान गर्न राहत प्याकेजको घोषणा
श्रमिक मजदुरलाई घरभाडा छुट गराउने सरकारको निणर्य
लकडाउनमा क्रिकेट नखेल्न आग्रह गर्दा प्रहरीमाथि कुटपिट, एक पक्राउ
बेलायतमा कोब्रा बैठक : २० हजारको मृत्यु हुने प्रक्षेपण
यस्तो बिजोग छ कोरोना उपचार गर्ने अस्पतालको, चिकित्सकहरुलाई पशुपतिनाथको भर !
प्रकाशित : २०७६ चैत १३ गते १९:२४
काठमाडौं। सरकारले कोभिड– १९ (कोरोना भाइरस) संक्रमणका लागि डेडिकेडेट अस्पताल तयार गरेको बताए पनि ती अस्पतालमा विरामी भर्ना भने भएका छैनन् । सशस्त्र प्रहरी बलको कल्याणकारी कोषले सञ्चालन गरेको बलम्बुस्थित अस्पताललाई सरकारले डेडिकेडेट अस्पताल भनेको छ । तर हालसम्म सशस्त्र प्रहरीले त्यहाँ विरामी लिन मानिरहेको छैन । आफ्नै एक हजार विरामी रहेको र तीन वटा कार्यालय त्यहीबाट सञ्चालन गर्नुपरेका कारण कोरोनाको उपचारका लागि केही दिन लाग्ने जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणमा केही दिन लाग्ने जनाएको छ । त्यसपछि मात्रै त्यहाँ आइसोलेशनमा राखिने विरामी लैजान मिल्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पतालमा केही विरामीहरु छन् । त्यहाँ रहेका दुई जना विरामी संक्रमित छन् भने अन्य विरामी आइसोलेशनमा छन् । उनीहरुले आइसोलेशनमा भएकालाई चिकित्सकहरुले उपचार गरिरहेका छन् । केही सीमित चिकित्सकमात्रै विरामी भएको स्थानमा पुग्ने गरेका छन् । एउटै सामाग्री दुइ जनाले बाँडेर लगाउनु पर्ने अवस्था छ ।
साँच्चै टेकुको अवस्था हेर्ने हो भने भगवना भरोसा मात्रै हो अर्को कुनै सुरक्षित उपाए देखिदैन । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी उपकरण र सामाग्री अभावमा निन्याउरो अनुहारमा काम गर्न बाध्य भएका छन् ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोरोना संक्रमित व्यक्तिको उपचारका लागि २४ आइसीयू बेड तयार गरेको छ । त्यस्ता बिरामीलाई छुट्टै राखेर उपचार गर्न आइसोलेशनका ३० र क्वारेन्टाइनका लागि ४५ बेड तयार गरिएको छ । तर विरामी भर्ना भएका छैनन् ।
संक्रमित व्यक्तिको उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुले लगाउने पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्वेपमेन्ट (पीपीई) निर्माणमा त्यहीँकै चार कर्मचारीले काम गरिहेको छन् । उपचारमा संलग्न सबै कर्मचारीका लागि क्वारेन्टाइन, खाना र बस्नका लागि भिन्नै व्यवस्था गरिएको पाटनले अस्पतालले जनाएको छ ।
यसअघि कोरोना संक्रमितको मुख्य उपचार हुने टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोगलाई यो संकटको अवधिमा माध्यम अस्पतालका रुपमा प्रयोग गरिने थियो । त्यहाँपनि उपचारका लागि चाहिने आवश्यक सरसामान छैनन् ।
टेकु अस्पतालमा संक्रमितको आशंकामा जाँच गर्नेहरुको संख्या ह्वात्तै वृद्धि हुन थालेपछि मन्त्रालयले पाटनमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको हो ।
त्यस्तै पोखरामा रहेको लेखनाथ सामुदायिक अस्पताललाई कोरोना संक्रमितहरुको उपचारका लागि तयार गरिएको छ । त्यहाँ नाम मात्रको अस्पताल भएकाले चिकित्सकहरु त्यहाँ जानसमेत डराएका छन् । चितवनको भरपुर अस्पताललाई अस्थायी कोरोना संक्रमित उपचारका लागि तयार गरिएको भए पनि सो अस्पतालले अहिलसम्म विराम लिन मानेको छैन, त्यहाँ विवाद भएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि खटाइएका स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक सामग्रीको अभाव झेल्न बाध्य छन् । ‘हामी काठमाडौं रहेका स्वास्थयकर्मीको अवस्था त यस्तो छ भने जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मी पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्टिम इक्वीपमेन्ट) लगायतका आवश्यक सामग्री अभावका बीचमा बिरामीको स्वास्थ्य चेकजाँच तथा आवश्यक परामर्शका काममा कसरी खटिइरहेका होलान’, टेकु अस्पतालका एक नर्सले भनिन् । उनका अनुसार हालसम्म मास्क र ग्लोव्सको भरमा काम गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुले जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र हेल्थ डेस्कबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । पीपीई नलगाइ स्वास्थ्य जाँच गर्दा सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्यकर्मीलाई नै भाइरस सर्ने खतरा भएकाले सचेत रहनुपर्नेमा सरकारले अहिलेसम्म पीपीईसम्म पुर्याउन सकेको छैन ।
सरकारले देशका कुनै पनि भागमा पीपीई पठाउन सकेको छैन । केही दिन अघि ६ वटा प्रदेशलाई केही पीपीई पठाए पनि हात्तिको मुखमा जीरा भनेजस्तै भएको छ । सरकारले यसबारेमा लकडाउन अघि स्वास्थ्य उपकरणको बारेमा कुनै पनि तयारी नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन् ।
सरकारले लकडाउन गर्दा जति स्यावासी पाए पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सामाग्रीप्रति वेवास्था गर्ने हो भने त्यसको मुल्य ठूलै चुकाउनु पर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाई छ । ‘नेपाल जस्तो मुलुकमा सबै खाले विरामीहरुलाई एकै अस्पतालमा राखेर उपचार गराउनुपर्ने अवस्था त्यसमाथि सुरक्षित उपकरण र औषधिको व्यवस्थापन छैन यसरी कति दिन काम गर्न सकिन्छ’, एक स्वास्थ्यकर्मीले भने ।
कोरोना भाइरस उपचारका लागि सरकारले आइतबार मात्रै आवश्यक सामाग्रीहरु वितरण गर्ने जनाएको छ । शनिवार चीनबाट आवश्यक सामाग्री आइसकेपछि मात्रै आइतबार हेलिकोप्टरमार्फत ती समान वितरण हुने सरकारको भनाई छ ।
ईङल्यान्डका क्रिकेटरले कमेन्ट गर्दा ट्रोलमा आएकी केटि बेलको हट अवतार (फोटोमा)
एउटा अद्भुत ग्रह जहाँ आगो दन्किरहन्छ र फलामको वर्षा हुन्छ
कुनै समस्या परे मलाई र मेरो सचिवालयमा सम्पर्क गर्नुहोला : काँग्रेस नेता सिंह
के प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मी मरे केही फरक नपर्ने हो र सरकार ?